Mayelana NATHI - Shandong Huashili Automation Technology Co., Ltd.
I-Shandong Huashili Automation Technology Co., Ltd.isendaweni yedolobha i-Rizhao, ikakhulu ebamba iqhaza ekubekeni ilebula yokulayisha othomathikhi othomathikhi nokusika umshini wokukodwa, umshini wokusika ingilazi othomathikhi, umshini wokusika othwebula othomathikhi we-NC othomathikhi, umshini wokusika ingilazi othomathikhi, umshini wokulayisha ingilazi othomathikhi, umshini wokusika itshe othomathikhi, nomshini wokugaya onqenqemeni wengilazi.
Ubuchwepheshe beHuashili buyisethi yocwaningo lwemishini ezenzakalelayo kanye nentuthuko, ukukhiqiza, ukuthengisa kwelinye lamabhizinisi wokukhiqiza asezingeni eliphakeme. Le nkampani inengcebo yesipiliyoni semishini yokukhiqiza imishini ezishintshayo, umthamo wokukhiqiza, izinga lobuchwepheshe namandla aphelele kwezomnotho embonini efanayo ngaphambili embonini yasekhaya, ucwaningo lwezinto zokusebenza ezishintshayo nokuthuthuka, ukulawula izinto, ukusebenza kwemishini nokwenza imodeli bekukulokhu izinga lokuhola lasekhaya, amasu amaningi. bagcwalise okungenalutho kwasekhaya. Insizakalo enhle emva kokuthengisa nenani elifanele, isikhathi eside ukunqoba udumo lwekhasimende. Ngokuhambisana nomgomo "wokuthembeka okuhle kuqala, ukwaneliseka kwamakhasimende", inkampani yethu isungule ubudlelwane besikhathi eside bokusebenzisana namabhizinisi amaningi.
Imishini yokukhiqiza yenkampani yethu inezici zekhwalithi enhle, ukucacisa okuphezulu, indawo encane yaphansi, okuhambayo, ukutshalwa kwezimali okuncane, umphumela osheshayo njalonjalo, okuwumkhiqizo ofanele womkhakha wokucubungula ingilazi.
Siyakwamukela ngobuqotho ukuthi uvakashele futhi uxoxisane nathi.
Ngokususelwa kumgomo wokuthi 'ubuqotho kuqala, ukwaneliseka kwamakhasimende', inkampani yethu isungule ubudlelwane besikhathi eside nezinkampani eziningi. Ingena ngonyaka we-2020, inkampani isingene ohlelweni lweminyaka emihlanu futhi isisondele kakhulu ekubeni ngumkhiqizo onethonya embonini yokukhiqiza ehlakaniphile. Ibhizinisi lamasu enkampani livuleke ngokwengeziwe, ubuchwepheshe obusha bunamandla amakhulu, ukuphathwa kokukhiqiza kuhlanjululwa ngokwengeziwe, futhi ukusebenza kwebhizinisi kwenziwa ngendlela eyodwa futhi kuyasebenza. Abantu baseHuashili bazohlangana namathuba nezinselelo ezintsha ngomqondo ovulekile nongavulekile. Le nkampani njalo ithatha ukuguqulwa kobuchwepheshe bube wukhiqiza njengenhloso yayo, futhi ilwela impilo ukusiza ukuthuthukiswa komnotho waseChina.